Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in dagaalkii ka socday deegaaka Abeesalaay uu sii xoogaystay. | JILYAALE_ONLINE
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in dagaalkii ka socday deegaaka Abeesalaay uu sii xoogaystay.
October 1, 2007 by jilyaale
Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool ayaa sheegaya in uu saaka dagaal xooggan oo la isugu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, kasoo ka dhex qarxay Ciidamada Maamul Goboleedyada Somaliland iyo Puntland ee iyagu isku horfadhiyay deegaannada Abeesalaay iyo Aricaddeeye.
Dagaalka ayaa waxa uu ka bilaawday Mawdari oo laascaanood Waqooyi kaga beegan 15KM xaalada ayaa ah mid aad u kacsan waxaana dagaalka uu bilaawday markii ay garaadyada ama Odayaashii dhaqanka ku guul dareysteen in ay xaliyaan Dagaalkan.
Waxaana laga dareemayaa magaalada Laascaanood kacsanaan iyada oo dadka deegaanka iyo gurmad ciidanka Daraawiishta ay ku sii qulqulayaan deegaanka Abeesalaay.
Labada maamul ayaa mid walba wuxuu sheeganayaa in uu guul ka gaaray dagaalka ka socda duleedka Magaalada Laascaanood.
Lama cadeyn karo xaalada dhabta ah iyo cidii meel qabsatay intaba, balse wixii soo kordha gadaal ayaanu idinkaga soo gudbin doonnaa.
← Dagaal culus oo Caawa maqrabkii ka billaabmay Xerooyinka ku yaalla agagaarka Wadada Warshadaha sida, xerada Guulwadayaasha, Lidka Taangiyada iyo Xarunta dhexe ee Gaashaandhigga.
Melles Zanawe oo u yeeray Wakiilladiisa Puntland & Somaliland Jen. Cadde Muuse iyo Daahir Riyaale inay si degdeg ah ku soo gelaan Xarunta dhexe ee Addis-ababa, si loo siiyo Awaamiir cusub. →